ဒီ ရာသီမှာ အဖြစ်များတဲ့ လည်ချောင်းနာအတွက်…အခုသောက်လိုက် ညပျောက်ပြီဒီ ရာသီမှာ အဖြစ်များတဲ့ လည်ချောင်းနာအတွက်…အခုသောက်လိုက် ညပျောက်ပြီ
လည်ချောင်းနာ အမြန်ပျောက်နည်းလေမျှဝေပေးပါရစေ၊ဆေးနည်းလေးပြောပြမယ်။ ဖွားကအမြဲလိုလည်ချောင်းနာတက်တယ်ရေခဲရေသောက်တာနဲ့ နာတော့တာဘဲ။ အိမ်မှာဆို ပဲပင်ပေါက်အမြဲဆောင်ထားရတယ်။ ဆေးနည်း လည်ချောင်းနာရင် ပဲပင်ပေါက်ရေနွေးနဲ့စိမ်သောက်မနက်သောက် ညနေပျောက်ဘဲ။ ဒီနည်းမသိခင်က ဆေးခန်းသွားပိုးသတ်ဆေးသောက်မှလည်ချောင်းနာပျောက်တာ၊ ခုမြန်မာဆေးနည်းတစ်ကယ်စွမ်းလို့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ခုပဲသောက်လိုက်ပြီညဆိုပျောက်ပြီ Credit > မြန်မာဆေးစွမ်းကောင်းများ Zawgyi Version ဒီ ရာသီမွာ ...
ပန်းရံလုပ်ရင်း သားဘွဲ့ယူတဲ့ဆီ လိုက်သွားတဲ့အခါပန်းရံလုပ်ရင်း သားဘွဲ့ယူတဲ့ဆီ လိုက်သွားတဲ့အခါ
ပန်းရံလုပ်ရင်း သားဘွဲ့ယူတဲ့ဆီ လိုက်သွားတဲ့အခါ သားဖြစ်သူ ဘွဲ့ယူအမှီ အလုပ်ကနေပြေးရောက်လားတဲ့ ပန်းရန်သမားတစ်ဦးရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးပါ။ မိဘဟာ ဘယ်လိုအနေအထားပဲဖြစ်ဖြစ် မိဘဟာ မိဘပါပဲ။ မိဘဟာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးလွန်းလို့ စွန်ပယ်ထားတက်ကြသော တချို့သော အရှက်အကြောက်ကြီးတဲ့ သားဆိုး သမီးဆိုးများလည်း ရှိနေသေး ...
၇-ရက်သားသမီးများအတွက် ၃-လပိုင်းဟောစာတမ်း၇-ရက်သားသမီးများအတွက် ၃-လပိုင်းဟောစာတမ်း
၇-ရက်သားသမီးများအတွက် ၃-လပိုင်းဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် ၃ လပိုင်းတလစာဟောစာတမ်း စီးပွားရေး ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်သူများအနေနဲ့ လုပ်ငန်းအသစ်တွေစတင်လုပ်ကိုင်ဖို့စိတ်ကူးကြံစည်မိနေတတ်ပါတယ် အကျိုးတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတွေနဲ့အကျိုးပေးပါတယ် လခစားဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ မိမိ အလုပ်မှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် များနဲ့ အပေးအယူမျှမျှလုပ်ကိုင်ရပီး အဆင်ပြေချောမွေ့မယ့်ကာလပါ အလုပ်ရှာဖွေနေသူတွေအတွက် မိမိကို ...
စားသုံးဖို့ မသင့်တော်တဲ့ ငါးအမျိုးအစား ( ၅ ) မျိုးစားသုံးဖို့ မသင့်တော်တဲ့ ငါးအမျိုးအစား ( ၅ ) မျိုး
စားသုံးဖို့ မသင့်တော်တဲ့ ငါးအမျိုးအစား ( ၅ ) မျိုး အချို့သော ငါးအမျိုးအစားတွေက ခန္ဓွာကိုယ်အတွက် ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ငါးစားသုံးခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေပြီး လူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရ ...
ဒညင်းသီးကို အဆိပ်လျော့အောင် ဘယ်လိုစားမလဲဒညင်းသီးကို အဆိပ်လျော့အောင် ဘယ်လိုစားမလဲ
ဒညင်းသီးတွေ ခပ်ပေါပေါ စျေးထဲမှာ တွေ့လာရပါပြီ။ အဆိပ်သီးလို့ပဲ ပြောပြော လူတွေနဲ့ မတည့်ဆုံး အသီးလို့ပဲ ပြောပြော ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေကတော့ ဝယ်စားကြတာပါပဲ။ တို့စရာ အနေနဲ့ ပြုတ်စား ဆားရည်စိမ်းစား ဟင်းချက်စားနဲ့ ဒီရာသီဆိုရင် ဒညင်းသီးပေါလို့ ပျော်တောင် ...
ရုရှားနိုင်ငံသုံး ရူဘယ်ငွေတန်ဖိုး ကျဆင်းသွားသဖြင့် ဘဏ်များမှ ငွေထုတ်ယူရန် နာရီပေါင်းများစွာ စိတ်ပျက်လက်ပျက် တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေကြသည့် ရုရှားနိုင်ငံသားများရုရှားနိုင်ငံသုံး ရူဘယ်ငွေတန်ဖိုး ကျဆင်းသွားသဖြင့် ဘဏ်များမှ ငွေထုတ်ယူရန် နာရီပေါင်းများစွာ စိတ်ပျက်လက်ပျက် တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေကြသည့် ရုရှားနိုင်ငံသားများ
ရုရှားနိုင်ငံသုံး ရူဘယ်ငွေတန်ဖိုး ကျဆင်းသွားသဖြင့် ဘဏ်များမှ ငွေထုတ်ယူရန် နာရီပေါင်းများစွာ စိတ်ပျက်လက်ပျက် တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေကြသည့် ရုရှားနိုင်ငံသားများ ရူဘယ်တန်ဖိုး ထိုးဆင်းသွားတာကြောင့် ရုရှားနိုင်ငံသားတွေဟာ ဘဏ်တွေရဲ့အပြင်ဘက်မှာ နာရီအတော်ကြာ စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေတာကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ရုရှားဗဟိုဘဏ်သည် ရူဘယ်တန်ဖိုး ကျဆင်းသွားသဖြင့် ...
ယူကေ၊ အမေရိကန်၊ ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ရုရှားမှာ နျူကလီးယားလက်နက် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ?ယူကေ၊ အမေရိကန်၊ ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ရုရှားမှာ နျူကလီးယားလက်နက် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ?
ယူကေ၊ အမေရိကန်၊ ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ရုရှားမှာ နျူကလီးယားလက်နက် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ? ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်သည် အနောက်နိုင်ငံများအား ယူကရိန်းအပေါ်လုပ်ရပ်သည် ၎င်းတို့မမြင်ဖူးသော အကျိုးဆက်များဆီသို့ ဦးတည်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျောချမ်းစရာသတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ရုရှားသမ္မတဟာ ယူကရိန်း၏ နေတိုးအဖွဲ့ထဲ ၀င်ရောက်ခြင်းအား ...
ဆေးရုံကုတင်ပေါ်မှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နှုတ်ဆက်စကားပြောနေတဲ့ ဘိုးဘွားစုံတွဲဟာ စစ်မှန်တဲ့အချစ်ရှိတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြနေဆေးရုံကုတင်ပေါ်မှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နှုတ်ဆက်စကားပြောနေတဲ့ ဘိုးဘွားစုံတွဲဟာ စစ်မှန်တဲ့အချစ်ရှိတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြနေ
ဆေးရုံကုတင်ပေါ်မှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နှုတ်ဆက်စကားပြောနေတဲ့ ဘိုးဘွားစုံတွဲဟာ စစ်မှန်တဲ့အချစ်ရှိတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြနေ Douyin (China’s TikTok) တွင် ပထမဆုံးထွက်ပေါ်ခဲ့သည့် ဗီဒီယိုအတိုလေးတွင် သက်ကြီးရွယ်အိုစုံတွဲသည် ဆေးရုံကုတင်ပေါ်တွင် စက်ကိရိယာများ တပ်ထားရသည့်ကြားမှ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မျက်လုံးချင်းဆုံကာ လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားသည်ကို ...
ငါးမျှားထွက်နေရင်း ခွေးလေးရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အပြုအမူကြောင့် ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူမှာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်…ငါးမျှားထွက်နေရင်း ခွေးလေးရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အပြုအမူကြောင့် ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူမှာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်…
ငါးမျှားထွက်နေရင်း ခွေးလေးရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အပြုအမူကြောင့် ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူမှာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်… ၂ နှစ်အရွယ် ခွေးလေးလီယာသည် ၎င်း၏ပိုင်ရှင် ရစ်ချ်ဝေကော့ခ်၏ နောက်သို့ လိုက်ကာ ငါးမျှားထွက်ခဲ့သည်။ သူတို့ ငါးဖမ်းတဲ့နေရာကို ရောက်တဲ့အခါ ခွေးလေးမှာ ရုတ်တရက် ထူးဆန်းတဲ့အမူအရာ ...
ဒေသခံတွေဆီက ငွေလိမ်ပြီးအလှူခံဖို့ ဘုန်းကြီးယောင်ဆောင်တဲ့ အမျိုးသားကို လယ်ကွင်းထဲမှာ အဝတ်အစားလဲရင်းတန်းလန်းတွေ့ရှိဒေသခံတွေဆီက ငွေလိမ်ပြီးအလှူခံဖို့ ဘုန်းကြီးယောင်ဆောင်တဲ့ အမျိုးသားကို လယ်ကွင်းထဲမှာ အဝတ်အစားလဲရင်းတန်းလန်းတွေ့ရှိ
ဒေသခံတွေဆီက ငွေလိမ်ပြီးအလှူခံဖို့ ဘုန်းကြီးယောင်ဆောင်တဲ့ အမျိုးသားကို လယ်ကွင်းထဲမှာ အဝတ်အစားလဲရင်းတန်းလန်းတွေ့ရှိ ရဟန်းသံဃာတော်များ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက် ၂၂၇ ချက်ရှိသည်။ လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းနှင့် လူအများ၏ကရုဏာထားမှုကို ရယူခြင်းအပါအဝင် အကုသိုလ်အလုပ်များကို ရှောင်ရှားရမည်ဟု ပါဝင်သည်။ ဒါကတော့ ငွေလိမ်ပြီးအလှူခံဖို့ ဘုန်းကြီးယောင်ဆောင်တဲ့ ...